Dhaymankii dib loo helay maxaa loo dhaliilay (Faallo) -
Waa macqul micnaha iyo ujeedka su’aashan in aad ku wareerto balse waa su’aal muhiim ah in lays waydiiyo hadaba Faaladaan ayaa ku qaadaadhigayaa ujeedka su’aashaan iyo sababta igu dhalisay:-
Qalinkii- Nuur Muuse Nur Inji
Dhaymankii dib loo helay maxaa loo dhaliilay?
Waa su’aal aan is waydiiyay kidib markii aan arkay eedaymo aan loo meel dayin oo baraha bulshada laysa dhaxmaraayo kuwaas oo loo jeedinaayo madaxweynaha somaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Waxaan xasuusanahay ka hor doorashidii saadaalin iyo xog aruurin lasameeyay in boqolkiiba 100%99 dadka soomaaliyeed ay taageeraayeen madaxweynaha hada talada haayo ee Farmaajo mar haddii riyadda rabi ku rumeeyay ma’aha in aad dhaliilo hadaneh hore ka keentaa waa soo jeedin kartaa latalin fikirkaaga ah lkn waa in aad raadisaa meel ku haboon in aad fikir kusoo bandhigto hadaba aan wax Yar ka xu soo qaab mamulkisii iyo xilalkii uu soo qabtay.
Shaqooyin kala duwan ayuu soo qabtay oo ay ka mid tahay dhanka xuquuqda aadamaha. Agaasime guud ayuu ka soo noqday hay’ad u doodda xuquuqda bulshada sanadkii 2002-dii.
Kontonkii maalmood ee ugu horeysay xafiiska ra’iisulwasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku guuleystay bixinta mushaaraadka ciidamda iyo shaqaalaha dowlada.
19-kii bishii Juun 2011, ra’iisulwasaare Farmaajo waxa uu iska casilay xilka, Ka dib heshiis lagu soo gaaray Kampala.
Waa iga su’aalee dhaymankaa dib loo helay maxaa loo dhaliilay??
W\_Q: Weriye Madax Banaan oo jooga South Africa oo lagu magacaabo Nuur Muuse Nur Inji
Related Items:Dhaymankii dib loo helay maxaa loo dhaliilay (Faallo), Featured